Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha oo casho sharaf kula qaatay ganacsatada soomaalida ee ku sugan dalka Turkiga. – MOCI
Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha oo casho sharaf kula qaatay ganacsatada soomaalida ee ku sugan dalka Turkiga.
Wasiirka wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha ee XFS Mudane Eng.Cabdullahi Cali Xasan oo Maalmahan safaro shaqo ku joogay dalka turkiga oo uu kaga qaybgalay shirar kadib markii casuumaad rasmi uu ka helay dhigiisa dalka Turkiga ayaa caawa kulan casho sharaf kula laqaatay magaalada istanbul ee caasimadda dalka Tukiga kula yeeshay ganacsatada soomaaliyeed ee ku sugan dalka Turkiga.
kulanka casho sharafta oo ay ganacsatada warbixin dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha ku saabsan ku siinayeen wasiirka ayaa waxa ay usoo gudbiyeen waxa rasmiga ah ee kajira dalka Turkiga iyo horumarka ay ka sameenayaan dhanka ganacsiga.
Wasiirka ayaa uga mahad celiyay ganacsatada somaliyeed ee uu caawa layeeshay kulanka asagoo kula dar daarmay in laga shaqeeyo horumarinta kaaba yaasha dhaqaalaha soomaaliya iyo sidoo kale in la kordhiyo qorshayaasha maalgashi ee dalka loogu shisayo.